Ị Pụrụ Ịmụta Ịchịkwa Nchegbu!
Teta! | Febụwarị 8, 2005
GỤỌ NKE Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English German Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Polish Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Swahili Turkish Ukrainian
“NDỌGA a na-adọga ịhụ na a na-edebe ọrụ, ezinụlọ, na ihe ndị ọzọ n’ọnọdụ kwesịrị ha esiela nnọọ ike n’afọ ndị na-adịbeghị anya.” Ihe a ka otu akwụkwọ nke na-ekwu banyere ndụ ezinụlọ bụ́ nke e bipụtara n’oge na-adịbeghị anya kwuru. N’ezie, anyị bi n’oge tara akpụ. Ma, nke a adịtụghị atụ ndị mmụta Bible n’anya n’ihi na Bible buru amụma na oge a ga-abụ ‘oge pụrụ iche nke ga-esi ike obibi.’—2 Timoti 3:1-5.
Jesús, bụ́ nwoke ji ụmụ atọ kwuru, sị: “Nchegbu adịghị njọ. Ihe dị na ya bụ na ị ghaghị ịmụta ịchịkwa ya.” N’ezie, a bịa n’ịchịkwa nchegbu, ọ pụrụ ịdị mfe ikwu ya ekwu karịa ime ya eme. Otú o sina dị, e nwere aro ndị dị mma na ụkpụrụ Bible ndị pụrụ inyere gị aka.
Ịmụta Ịchịkwa Nchegbu Ọrụ na-akpata
Ị̀ na-enwe nchegbu, ikekwe n’ihi ọnọdụ e nwere n’ebe ị na-arụ ọrụ? Nanị ihe ịnọgide na-ata ahụhụ n’akọsaraghị ya mmadụ pụrụ ime bụ ime ka nchegbu gị ka njọ. Dị ka Bible kwuru n’Ilu 15:22, “mmebi echiche nile dị mgbe izu nzuzo na-adịghị.”
Ndị meworo nnyocha banyere nchegbu a na-enwe n’ebe ọrụ na-atụ aro ka ị kọsara ya onye were gị n’ọrụ, n’ihi na o nwere ike inyere gị aka ma ọ mara banyere ya. Nke a apụtaghị na ị ga-eji iwe na ọnụma kọsara ya ya. “Ime nwayọọ na-eme ka mmehie ukwu dị iche iche kwụsị,” ka Eklisiastis 10:4 kwuru. Jide onwe gị aka ma zere iji iwe gwa ya okwu. Ikekwe, okwu gị pụrụ ime ka ọ ghọta na ị ga na-arụpụtakwu ihe ma nchegbu gị kwụsịlata.
Ị pụkwara ime otu ihe ahụ banyere nsogbu ndị ọzọ ị na-enwe n’ebe ọrụ, dị ka esemokwu gị na ndị ọrụ ibe gị na-enwe. Chọọ ụzọ ndị dị mma isi dozie esemokwu ndị dị otú ahụ . Ị pụrụ ime nnyocha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. E bipụtawo ọtụtụ isiokwu ndị pụrụ inye aka na Teta! * Ọ bụrụ na ọnọdụ gị eyie ihe na-agaghị ekwe mmete, ọ pụrụ ịkasị mma ka ị chọọ ọrụ ebe ọzọ.
Ịkwụsịlata Nchegbu Ego Na-akpata
Bible nwekwara ndụmọdụ ndị pụrụ inyere gị aka ịkwụsịlata nchegbu ị na-enwe n’ihi ego. Jizọs Kraịst gbara ume, sị: “Kwụsịnụ ichegbu onwe unu banyere mkpụrụ obi unu maka ihe unu ga-eri ma ọ bụ ihe unu ga-aṅụ, ma ọ bụ banyere ahụ́ unu maka ihe unu ga-eyi.” (Matiu 6:25) Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume? Ọ bụ site n’ịmalite inwe obi ike na Jehova Chineke ga-egbo mkpa gị ndị bụ́ isi. (Matiu 6:33) Nkwa Chineke abụghị nkwa elu ọnụ. Ọ na-enye ọtụtụ nde Ndị Kraịst taa ume.
N’ezie, ọ dịkwa gị mkpa inwe “nzube ihe,” ma ọ bụ ezi amamihe, ma a bịa n’ihe metụtara ego. (Ilu 2:7; Eklisiastis 7:12) Bible na-echetara anyị, sị: “Ọ dịghị ihe anyị webataworo n’ime ụwa, ọ dịghịkwa ihe anyị pụrụ iburu pụọ na ya. Ya mere, ebe anyị nwere ihe oriri na ihe mgbokwasị, anyị ga-enwe afọ ojuju n’ihe ndị a.” (1 Timoti 6:7, 8) Ịmụta ịbụ onye obere ihe na-eju afọ bụ ihe kwere omume na ihe e kwesịrị ime eme. Ì chetara Leandro, bụ́ nwoke ahụ jizi oche nkwagharị aga n’ihi ihe ọghọm o nwere? Ya na nwunye ya mere ihe iji chekwaa ego ha. Leandro kọwara, sị: “Anyị na-agbalị ichekwa ego. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ọ dịghị ihe anyị ji ọkụ eletrik eme, anyị na-agbanyụ ya iji belata ego anyị ga-akwụ n’ụgwọ ọkụ. Mgbe anyị chọrọ ịga ihe, anyị na-ahazi ebe ndị anyị chọrọ ịga ma gakọta ha ọnụ iji belata ego anyị ga-emefu ná mmanụ ụgbọala.”
Ndị nne na nna pụrụ inyere ụmụ ha aka inwe echiche ziri ezi. Ada Leandro bụ́ Carmen kwetara, sị: “Ana m enwebu ọchịchọ ịzụ ihe ọ bụla gụrụ m, ma ndị mụrụ m enyerela m aka ịghọta ihe ndị dị mkpa n’ezie na ihe ndị na-adịghị mkpa. Ná mmalite, o siiri m ike ime mgbanwe. Ma, amụtara m ịmata ọdịiche dị n’etiti ihe na-agụ m na ihe na-akpa m.”
Nkwurịta Okwu —Ihe Na-akwụsịlata Nchegbu
Ebe obibi kwesịrị ịbụ ebe ọ ga-abụ mmadụ lọta, nchegbu ya akwụsị. Ma ọtụtụ mgbe, ọ na-abụ ebe kasị akpata ya. N’ihi gịnị? Akwụkwọ bụ́ Survival Strategies for Couples kwuru, sị: “Ndị di na nwunye . . . bụ́ ndị obi na-adịchaghị eru ala, ma ọ bụ ndị nke na-ese okwu, na-ekwu na otu n’ime ihe ndị kasị eme ka ha na-esekarị okwu bụ enweghị nkwurịta okwu.”
Ụkpụrụ Bible pụrụ inyere ndị di na nwunye aka imeziwanye ụzọ ha si ekwurịta okwu. Bible na-ekwu na e nwere “mgbe ịgba nkịtị, na mgbe ikwu okwu” nakwa na “okwu e kwuru na mgbe ya, lee ka o si dị mma nke ukwuu!” (Eklisiastis 3:1, 7; Ilu 15:23) Ịmara nke a pụrụ igbochi gị iwelite okwu na-akpasu iwe mgbe ike gwụrụ di gị ma ọ bụ nwunye gị. Ọ́ kaghị mma ichere ruo oge kwesịrị ekwesị—mgbe o yiri ka di gị ma ọ bụ nwunye gị ọ̀ ga-aka adị njikere ige gị ntị?
N’ezie, ọ bụrụ na ụbọchị adịghịrị gị mma n’ebe ị na-arụ ọrụ, e nwere ike ọ gaghị adịrị gị mfe ijide onwe gị ma ọ bụ inwe ndidi. Ma, gịnị pụrụ ime mgbe anyị ji olu ike mee ka di ma ọ bụ nwunye anyị mara ihe na-enye anyị nsogbu n’obi? Bible na-echetara anyị na “okwu mwute na-akpali iwe.” (Ilu 15:1) N’aka nke ọzọ, “ụgbụgbọ mmanụ aṅụ ka okwu ọnụ ụtọ nile bụ, nke na-atọ mkpụrụ obi ụtọ, bụrụkwa ihe na-agwọ ọkpụkpụ n’ọrịa.” (Ilu 16:24) Ọ pụrụ ịchọ mkpebi siri nnọọ ike iji hụ na “obi ilu na iwe na ọnụma na iti mkpu na okwu mkparị” abataghị ná mkparịta ụka di na nwunye. (Ndị Efesọs 4:31) Otú ọ dị, uru dị na ya ruru mgbalị e meere ya. Ndị di na nwunye bụ́ ndị na-ekwurịta okwu pụrụ ịbụrịtara ibe ha ndị nkasi obi ma na-akwadorịta ibe ha. “N’aka ndị a dụworo ọdụ ka amamihe dị,” ka Ilu 13:10 kwuru. *
Ihe Ịma Aka nke Ndị Mụrụ Ụmụ na Ụmụ Ha Inwe Nkwurịta Okwu
Iso ụmụaka ekwurịta okwu bụ ihe ịma aka—nke ka nke ma ọ bụrụ na oge adịchaghị. Bible gbara ndị nne na nna ume ịdị na-agwa ụmụ ha okwu mgbe ọ bụla, dị ka mgbe ha ‘na-anọdụ n’ụlọ ha, na mgbe ha na-eje ije n’ụzọ.’ (Deuterọnọmi 6:6-8) Leandro kwuru, sị, “Mmadụ aghaghị ịchọ ohere iji soro ụmụ ya na-ekwurịta okwu. Mụ na nwa m nwoke nọrọ n’ụgbọala, ana m eji ohere ahụ eso ya akparịta ụka.”
N’ezie, ọ bụghị ndị nile mụrụ ụmụ ka ọ na-adịrị mfe iso ụmụ ha ekwurịta okwu. Alejandra, bụ́ nwanyị ji ụmụ atọ, kwetara, sị: “Amaghị m otú e si ege ntị. Amaghị otú e si enwe ezi nkwurịta okwu mere ka m nwewe obi ọjọọ na obi amamikpe.” Olee otú nne ma ọ bụ nna pụrụ isi meziwanye ihe n’akụkụ a? Malite site n’ịmụta “ịdị ngwa n’ịnụ ihe.” (Jems 1:19) “Ige ntị nke ọma bụ ụzọ kasị mma isi mee ka nchegbu kwụsịlata,” ka Dr. Bettie B. Youngs kwuru. Ị ghaghị ilebara otú i si ege ntị anya. Na-ele onye na-agwa gị okwu anya n’anya. Zere ime ka a ga-asị na nsogbu ụmụ gị na-enwe adịghị ihe ọ bụ. Gbaa ụmụ gị ume ịdị na-akọrọ gị obi ha. Na-ajụ ha ajụjụ ndị dabara adaba. Na-eme ka ha mara mgbe nile na ị hụrụ ha n’anya nakwa na obi siri gị ike na ha ga-eme ihe dị mma. (2 Ndị Tesalọnaịka 3:4) Soro ụmụ gị na-ekpekọ ekpere.
Inwe ezi nkwurịta okwu chọrọ mgbalị. Ma, ime ya pụrụ inyere gị aka ịkwụsịlata nchegbu ị na-enwe n’ụlọ. Ọ bụrụ na gị na ụmụ gị na-ekwurịta okwu, ọ ga-enyere gị aka ịma ma hà na-enwe nchegbu. Ị ga-aka enwe ike inye ụmụ gị nduzi amamihe dị na ya ma ị ghọta otú obi dị ha na ọnọdụ ha nọ na ya. N’ikpeazụ, ụmụaka ndị a gbara ume ịdị na-ekwupụta nchegbu ha agachaghị enwe ọchịchọ iji àgwà ọjọọ mee ka a mara na ọ dị ihe na-enye ha nsogbu n’obi.
Imekọ Ihe Ọnụ—Isi Ihe Na-enye Aka n’Ịrụ Ọrụ Ndị Dị n’Ụlọ
Mgbe di na nwunye na-arụ ọrụ ego, ọrụ ndị dị n’ụlọ pụrụ ịghọ ihe ọzọ na-akpata nchegbu. Ụfọdụ ndị nne na-arụ ọrụ na-achịkwa ọnọdụ ahụ site n’iwebilata ọrụ ndị ha na-arụ n’ụlọ. Ha pụrụ ikpebi na ọ gaghị ekwe ha omume ma ọ bụ na ọ baghịrị ha uru ịdị na-esi ọtụtụ nri. Ì chetara ndụmọdụ Jizọs nyere otu nwanyị nọ na-esi ọtụtụ nri? Jizọs gwara ya, sị: “Ihe ole na ole, ma ọ bụ nanị otu ihe, dị mkpa.” (Luk 10:42) N’ihi ya, na-eme ka ihe dị mfe. Akwụkwọ bụ́ The Single-Parent Family tụrụ aro, sị: “Na-esi ofe na nri ndị ọzọ e ji otu ite esi iji mee ka ihe ndị ị ga-asa mmiri ghara ihi nne.” Ee, iwebilata ọrụ ndị ị na-arụ n’ụlọ pụrụ ime ka nchegbu gị kwụsịlata.
I megodị ya otú ahụ, a pụrụ inwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa ka i mee. Otu nne na-arụ ọrụ ego kwetara, sị: “Mgbe m dị obere, apụrụ m ime ihe ọ bụla n’onwe m. Ugbu a m katarala ahụ́, ọ na-esiziri m ike. Ndụ gbalụ gbalụ m biri amalitela inye m nsogbu n’ahụ́. Ya mere, otú mmadụ nile nọ n’ụlọ anyị si emekọ ihe ọnụ na-egosi na ha na-echebara m echiche, o sokwa eme ka m ghara ịdị na-echegbu onwe m.” N’ezie, ọ bụrụ na mmadụ nile nọ n’ezinụlọ agbakọọ aka na-arụ ọrụ ụlọ, ọ gaghị abụrụ onye ọ bụla oké ọrụ. Otu akwụkwọ na-ekwu banyere ịzụ ụmụ kwuru, sị: “Ikenye ụmụaka ọrụ ndị dị n’ụlọ bụ otu n’ime ụzọ ndị kasị mma isi mee ka ha malite inwe . . . mmetụta nke ịbụ ndị ma arụ ọrụ. Ịrụchi ọrụ ndị dị n’ụlọ anya na-eme ka ha malite ịkpa àgwà ọma na ile ọrụ anya n’ụzọ dị mma.” Gị na ụmụ gị ịdị na-arụkọ ọrụ ndị dị n’ụlọ ọnụ pụkwara ime ka i nwee oge gị na ha ga-eji na-anọkọ.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Julieta kwuru, sị: “Ana m achọpụta na obi na-adị mama m ụtọ ma m nyere ya aka n’ọrụ. Nke ahụ na-enye m obi ụtọ ma na-eme ka m nwee mmetụta nke ịbụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ na-enyere m aka iji ezinụlọ anyị kpọrọ ihe. Ịmụta otú e si arụ ọrụ ndị dị n’ụlọ akwadebewo m maka ọrụ ndị dịịrị m n’ọdịnihu.” Mary Carmen kwukwara n’otu aka ahụ, sị: “Site n’oge anyị dị obere, ndị mụrụ anyị kụziiri anyị ilekọta onwe anyị. Nke a abaworo anyị uru dị ukwuu.”
Ụzọ Ndị Dị Mma Isi Chịkwaa Nchegbu
Nchegbu bụ ihe ya na ndụ nke oge a so aga; ị pụghị ịgbata ya n’ọsọ. Otú ọ dị, i nwere ike ịmụta otú ị ga-esi chịkwaa ya. (Lee igbe dị na peeji nke 10.) Ịgbaso ụkpụrụ Bible nwere ike inye aka. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ọnọdụ ụfọdụ ị nọ na ya adịghị enye gị ọnụ okwu, cheta na “onye na-ahụ n’anya dị nke na-arapara n’ahụ́ karịa nwanne.” (Ilu 18:24) Soro enyi gị tozuru okè ma ọ bụkwanụ di ma ọ bụ nwunye gị kwurịta ya. Ronald L. Pitzer, bụ́ ọkà ná mmekọrịta mmadụ na ibe ya kwuru, sị: “Anọla na-ebu nsogbu gị n’obi. Kọsara ya onye isi jụrụ oyi bụ́ onye o yiri ka ọ̀ ga-aghọta ọnọdụ gị ma chebara gị echiche.”
Bible na-ekwukwa banyere mmadụ ‘imeso mkpụrụ obi ya ezi ihe.’ (Ilu 11:17) Ee, ọ dị mma ilebara onwe gị anya. Bible kwuru, sị: “Ọ dị mma, bụ́ otu njuaka n’izu ike, karịa njuaka abụọ n’ịdọgbu onwe gị n’ọrụ na ịchọ ijide ifufe.” (Eklisiastis 4:6) Iwepụtatụ oge iji zuru ike pụrụ ịbara gị uru dị egwu—ọ bụrụgodị na ọ bụ nanị minit ole na ole n’isi ụtụtụ nke i ji tụrụ ndụ, gụọ akwụkwọ, kpee ekpere, ma ọ bụ tụgharịa uche n’udo!
Ọ bakwara uru ka ị na-emega ahụ́ ruo n’ókè kwesịrị ekwesị ma na-eri nri na-edozi ahụ́. Otu akwụkwọ na-ekwu banyere ịzụ ụmụ na-echetara anyị, sị: ‘Mgbe i ji ụfọdụ n’ime oge gị na ume gị lebara onwe gị anya, ihe ị na-eme bụ inwetaghachi ume. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ mgbe nile, ị ghaghị ijide n’aka na ị na-ezu ike. Ma ọ́ bụghị ya, ike ga-agwụ gị, ma ọ bụrụkwa na ị kwụsịghị ọrụ kpamkpam.’
Tụkwasị na nke a, Bible na-enyere mmadụ aka ịzụlite àgwà ndị dị mkpa iji chịkwaa nchegbu, àgwà ndị dị ka “ịdị nwayọọ n’obi,” ndidi, na obiọma. (Ndị Galeshia 5:22, 23; 1 Timoti 6:11) Nke ka nke ahụ bụ na Bible na-enye olileanya—nkwa nke ụwa ọhụrụ na-abịanụ, nke ihe nile na-eme ka mmadụ na-ahụsi anya na-agaghị adị na ya! (Mkpughe 21:1-4) N’ihi ya, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmụta àgwà nke ịgụ Bible kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị inweta enyemaka iji malite usoro ihe omume dị otú ahụ, obi ga-adị Ndịàmà Jehova ụtọ inyere gị aka n’efu.
Ihe a na-ekwu ebe a abụghị na Onye Kraịst adịghị enwe nchegbu ná ndụ. Ma Jizọs kwuru na mmadụ pụrụ izere ịbụ onye ‘nchegbu nke ndụ na-anyịgbu.’ (Luk 21:34, 35) Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị bịa mara Jehova Chineke dị ka enyi gị, ọ pụrụ ịbụrụ gị ezigbo ebe mgbaba! (Abụ Ọma 62:8) Ọ pụrụ inyere gị aka ịchịkwa nchegbu ndị ị na-enwe ná ndụ.
^ par. 7 Lee usoro isiokwu bụ́ “E Mekpọọ Gị Ọnụ n’Ebe Ọrụ—Gịnị Ka Ị Pụrụ Ime?” bụ́ ndị gbara na Teta! nke May 8, 2004.
^ par. 15 Iji nwetakwuo ihe ọmụma, lee isi nke 3 nke akwụkwọ bụ́ Isi Ihe Na-akpata Obi Ụtọ Ezinụlọ, nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo dị na peeji nke 11]
“Mgbe m dị obere, apụrụ m ime ihe ọ bụla n’onwe m. Ugbu a m katarala ahụ́, ọ na-esiziri m ike. Ndụ gbalụ gbalụ m biri amalitela inye m nsogbu n’ahụ́”
[Igbe/Foto ndị dị na peeji nke 10]
Ụzọ Isi Mee Ka Nchegbu Kwụsịlata
▪ Na-ezu ike nke ọma kwa ụbọchị
▪ Na-eri ezigbo nri mgbe nile. Zere iribiga nri ókè
▪ Na-emega ahụ́ mgbe nile n’ụzọ kwesịrị ekwesị, dị ka ịgasi ije ike
▪ E nwee ihe na-enye gị nsogbu n’obi, kọsara ya enyi gị
▪ Na-ewepụtakwu oge iji soro ezinụlọ gị na-anọkọ
▪ Na-eke ọrụ ndị dị n’ụlọ eke
▪ Mara ihe ndị ị na-agaghị arụli na ndị ị na-agaghị edili
▪ Setịpụ ihe mgbaru ọsọ ndị ị pụrụ iru; emela ka i zuru okè
▪ Na-eme ihe n’usoro; nwee usoro ihe omume dị mma, nke ezi uche dịkwa na ya
▪ Mụta ịkpa àgwà kwesịrị Ndị Kraịst dị ka ịdị nwayọọ na inwe ndidi
▪ Na-ewepụta oge mgbe ụfọdụ iji na-anọrọ onwe gị
Iji nkwanye ùgwù kọsara onye were gị n’ọrụ nsogbu gị nwere ike ime ka nchegbu ọrụ na-akpatara gị kwụsịlata
Ndị nne na nna pụrụ iso ụmụ ha kwurịta ụzọ ndị a ga-esi na-echekwa ego
Dị ka onye ntorobịa, na-akọsara onye nwere ike inyere gị aka nchegbu ndị ị na-enwe
[Foto dị na peeji nke 8, 9]
Mmadụ nile pụrụ inye aka rụọ ọrụ ndị dị n’ụlọ
Ndị Nchegbu Na-akpa Aka Ọjọọ!
Nchegbu—Ihe Ndị Na-akpata Ya na Mmetụta Ndị Ọ Na-enwe
Ọnọdụ Ndị Dọkịta n’Ụwa nke Na-agbanwe Agbanwe
Ndị Dọkịta Na-enwe Nchegbu
Gịnị Ka Ọdịnihu Ga-abụrụ Ọrụ Ịgwọ Ọrịa?
Ilebara Ụmụaka Anya Otú Ahụ́ Ha Chọrọ
Hanbok Ejiji Ndị Korea
Gịnị Ka M Kwesịrị Ime Mgbe Ndị Ọzọ Kọsaara M Nsogbu Ha?
Ịnagide Uche Mkpasasị Nke Mwakpo Ndị Na-eyi Ọha Egwu Kpatara
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu MAGAZIN Febụwarị 8, 2005
Febụwarị 8, 2005
MAGAZIN Febụwarị 8, 2005